देश/जिल्ला समाचार « Today Khabar
रुकुम ३, कात्तिक । १४ वर्षीया एक बालिकालाई बलात्कार गर्न खोज्ने एक युवकलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमले पक्राउ गरेको छ । १४ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती गर्न खोज्ने चौरजहारी नगरपालिका
बर्दिया ३, कात्तिक । जिल्ला कारागार बर्दियाका कैदीबन्दीले सात सूत्रीय माग राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर कुरुम्बाङ्ग मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । कारागार निरीक्षणको क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी
महोत्तरी ३, कात्तिक । महोत्तरीको औरही नगरपालिकाकी ८ महिने शिशु सोनाली चौधरीको हत्याको अभियोगमा पक्राउ परेका छन् । सोनालीको हत्या भएको झण्डै २ महिनापछि महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका–१ हत्तिसर्वाका २५ वर्षका भरत
जनकपुरमा ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा एक जनाको मृत्यु
जनकपुर ३, कात्तिक । जनकपुरमा ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । विस्फोटमा ग्यास वेल्डिङ पसल सञ्चाल गर्दै आएका जनकपुरधाम ७ बस्ने ४७ वर्षीय प्रमोद साहको मृत्यु
कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले मनाए विपन्न माझी र बोटे समुदायसँग दसैं
गुल्मी ३, कात्तिक । नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले गृह जिल्ला गुल्मीका विपन्न माझी र बोटे समुदायसँग दशै मनाउनुभएको छ । विगत तीन वर्षदेखि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका पिछडिएको समुदायसँग सामुहिक
उपराष्ट्रपतिदेखि सर्वसाधारणसम्म टीका थाप्न शितल निवासमा
काठमाण्डौ ३, कात्तिक । राष्ट्रपति विद्यावी भण्डारीले उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरुलाई टीका लगाइदिएकी छन् । शुक्रबार शितलनिवासमा उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्रीहरु, राज्यमन्त्री लगायतले टीका लगाएका
लात्कारको आरोपमा पाल्पामा एक जना पक्राउ
पाल्पा २, कात्तिक । युवती बलात्कारको आरोपमा पाल्पामा एक युवक पक्राउ परेका छन् । तिनाउँ गाउँपालिका २ की १९ वर्षीया युवतीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा स्थानीय २० वर्षीय किरण गाहालाई
ट्याक्सी मिटरमा जान मानेन ? फाेन गर्नुहाेस् !
काठमाण्डौ २, कात्तिक । काठमाडाैं उपत्यकामा चल्ने ट्याक्सीले आज मिटरमा नचलाए कारबाही हुने भएको छ । ट्याक्सी चालकले मिटरमा जान नमाने ट्राफिक प्रहरीको फोन नम्बर १०३, ४२१९६४१ एव हेलो सरकार
चितवन २, कात्तिक । चितवनमा बस दुर्घटना हुँदा ३ जनाको ज्यान गएको छ भने २१ जना घाइते भएका छन् । काँकडभिट्टाबाट पोखराका लागि छुटेको ना ५ ख ४३ ८३ नम्बरको
देश विकासको महाअभियानमा सहभागी हुन आहृवान : प्रधानमन्त्री
काठमाण्डौ २, कात्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश विकासको महाअभियानमा सहभागी हुन आहृवान गरेका छन् । वडादशैंको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार देशलाई आर्थिक समृद्धि र विकासको
दशैं नआइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ : निर्मलाकी आमा
कञ्चनपुर १, कात्तिक । सबैतिर दशैंको चहलपहल बढेका बेला निर्मला पन्तको घर भने सुनसान छ । १३ वर्षीया छोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको झण्डै तीन महिनामा पनि अपराधीहरु पत्ता लगाग्दा परिवारमा